तर्साउनेको चाहिँ रातारात तरक्की
Thursday,7Jun, 2018 10:51 PM
डर, त्रास र भय सिर्जना नगरुञ्जेल कुनै पनि देश नबन्ने रहेछ । सिंगापुर र मलेसियाले त्यसै विकास गरेका होइनन् । आखिर डण्डा नदेखाई देश विकासका काम अघि नबढ्ने उदाहरण छिमेकी चीन पनि हो ।
प्रभाव र पहुँचको आधारमा ठेक्का ओगट्ने र ५/६ वर्षदेखि कुनै काम नगरी बस्नेहरू अहिले भटाभट चल्मलाउन थालेका छन् । यस क्रममा कालोसूचीबाट बच्न कोही अदालत धाउँदै छन् त कोहीचाहिँ बाटो खोस्रनसम्म सुरसार झिक्दै गरेका देखिन्छन् । पेश्की लिएर त्यो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगाउने अनि बाटो, भवन, पुल, इत्यादिको निर्माण अलपत्र पार्नेहरू अहिले धेरै भेटिएका छन् । यही कारण देश धुलो, धुँवा, खाल्डाखुल्डी र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । तर, ती सबैको बाबजुद तर्साउने एउटा निकायको काम भने अचम्मै लाग्दो गरी तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । राजधानीको अनामनगरमा बन्दै गरेको उक्त भवनका सन्दर्भमा यस्तो रमाइलो देखिएको हो । मंसिर १८ गते राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरेको सो भवनको अण्डर ग्राउण्डसहित तेस्रो तलाको छतसम्म ढलान भइसकेको छ । त्यसो त शुरुमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभएको थियो– ‘मैले शिलान्यास त गरेँ तर यो काम बेलैमा सम्पन्न हुने हो वा होइन ? कतै बेइज्जती पो हुने हो कि ?’ तर काम यसरी अघि बढ्दै छ कि पत्याउनै मुस्किल । कारण के होला ?
त्यहाँँ कार्यालय बस्ने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, प्रत्येक १५÷१५ दिनमा साइटमा जाने र फोटो खिच्ने गर्दा रहेछन् । ठेकेदार र इञ्जिनियरलाई बोलाएर ‘खबरदार, ढिलासुस्ती ग¥यौ भने कालोसूचीमा राखिदिन्छु, भुक्तानी रोकिदिन्छु’ भन्दै धम्कीकै भरमा काम अघि बढ्दा अहिले ५ महिनामा उल्लेख्य काम भएको हो । यसरी असोज मसान्तसम्म सबै ढलान सक्ने र अर्को वर्ष असारमा भवन जिम्मा दिने गरी निर्माणमा ठेकेदार जुटेका छन् । लुम्बिनी, पार्वती, गौरी, शान्ति, जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण ठेक्का पाएको सो काममा बाहिर देखिने हर्ताकर्ताचाहिँ राम थापा हुन् । उनले २५ महिनाअघि नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि एक वर्षसम्म काम नगरी बसेका थिए जबकि पेश्की रकम त्यसैबेला गएको हो । शुरुमा साइट क्लियर भएन भन्ने बहाना निकालेका थिए ।
५५ करोड लागतमा सो भवन निर्माण ठेक्का दिइएको स्रोतले बताएको छ । अख्तियार, महालेखाजस्ता डर, त्रास देखाउन सक्ने कार्यालयको काम भटाभट जारी रहे पनि सोही भवनको पछिल्तिर लोकसेवा आयोगजस्ता अफिसको भने अझैसम्म सुरसार छैन । भूकम्पको कारण क्षेत्रीय कार्यालयमा बसाइँ सरेको अनामनगरमै अवस्थित लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरीमा बन्नुपर्ने हो । तर, ठेकेदारले काम गरिरहेका छैनन् । लोकसेवाले कालोसूचीमा राख्ने, भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा जाक्नेजस्ता धम्की दिन सक्ने कुरै भएन । ठेकेदारको छोरालाई अफिसरको जाँचमा फेल गराइदिन्छु भन्न पनि मिलेन । यही असार १ गते सो भवन शिलान्यास हुने तयारी छ । तर, समयमै बन्ला त ? शंका प्रशस्तै छ ।
​निर्मलाका हत्याराको खुल्नै लाग्यो नालिबेली